Chignons for men - U qurxi timahaaga ragga Ragga leh | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, fashion, Timaha
Ma jiro farqi u dhexeeya labada jinsi marka ay timaaddo timo ururinta. Ragga oo dhan oo leh timo dhaadheer, waxay siin kartaa taabashadaas cusub iyo soo jiidashada. Gaar ahaan da'da ama qaabka uu nin walba doonayo inuu xirto, waqtiyadan waxaad qaadan kartaa leexashada oo waxaad ku xiran kartaa ficil ahaan muuqaalka aad rabto, waana taas qaansooyinka ragga ayaa ku jira moodada.
Ragga ragga ah looma baahna in lagu soo ururiyo wax yar oo hooseeya oo lagu xiro xarig caag ah, hadda Waxaad ku sharraxeysaa buushashka sare, dusha sare ama xitaa kuwa kale ee la soo ururiyey ee loo yaqaan timo samurai. Waa isbeddel si isa soo taraysa uga dhex muuqda xitaa warbaahinta, waa la ogyahay annaga si aan ugu aragno kuwa caanka ah, hipster iyo ciyaartoyda.
1 Noocyada qaansooyinka ragga
1.1 Buunsha samurai
1.2 Qaansada qaabka caadiga ah
1.3 Bun yar
1.4 Buunshada tidcan
1.5 Bun sare
1.5.1 Haddii timahaagu aad u leexan yihiin
1.5.2 Ragga timaha dhaadheer leh
1.5.3 Bun yar ayaa sidoo kale jira.
Noocyada qaansooyinka ragga
Timahaaga sii qallooc cusub, jidhkaaga u raaxee maalmahaas kulul oo timahaaga kor u taag. Waxaa jira qaabab badan oo kaliya waa inaad doorataa midka ugu caansan iyo midka ku habboon shakhsiyaddaada.
Qaansooyinka noocan ah ee ragga waa hal tallaabo oo dheeraad ah oo timaha la soo ururiyay, maaddaama dhererkiisu ka sarreeyo. Waxaa loogu talagalay raggaas iyagu naftooda aaminsan inay yihiin dagaalyahanno magaalo waana taas waa mid casri ah, xarrago leh oo dabiici ah. Isbeddelkeedu waa mid casri ah maaddaama badanaa la xiro xitaa gadhka qaro weyn. Qaabkiisa ayaa ah inuu xirto iyadoo timahiisa loo xiiray dhinacyada iyo qaansada taaj sida Samurai:
Waa inaad toosisaa timaha.
Ku soo qaad dusha dusha, taas oo aad u sarreysa, in ka badan ama ka yar taajka.
Tawxiidka faraska ku wareeji duub oo ku hubi biinanka xiisaha leh.
Si aad kor ugu qaaddo, waxaad isticmaali kartaa wax yar oo timo-qurxin ah si aad u sii dheeraato.
Qaansada qaabka caadiga ah
Timo-jaristani waxay soo bandhigaysaa qaabkeeda sida wanaagsan ee ereygeedu u leeyahay: "aan rasmi ahayn". Halkii Waa rooti lagu soo ururiyey madaxa korkiisa laakiin qaab qasan oo caadi ah. Ma aha in si fiican loo qaabeeyo, laakiin waa inay lahaato xoogaa mug ah. Si tan loo sameeyo, mari xumbo yar timahaaga oo si tartiib ah u rux si aad u siisid mugga. Ka dib soo qaado oo ku xir xarig cinjir ah madaxaaga korkiisa oo samee qaanso.
Buunshadani waa mid aasaasi ah, waa inaad timaha u shanleysaa oo aad xiraa adigoon kor u qaadin. Tan darteed uma baahnid inaad qayb ka mid ah qayb ka dhigtid meel kasta, kaliya waa inaad timaha dib u jiiddaa oo aad ku shanleeysaa farahaaga ama shanlo, si aadan u helin buro yaryar oo aan loo baahnayn.
Waad shanleyn kartaa shanlada wax yar markii aad cadayanaysid xitaa waxaad ku dari kartaa wax yar oo jel ah oo hagaajinaya. Markii aad diyaarsatid, timaha ku xir sharooto caag ah, oo ku taal sinta qoorta.
Waa inaad timaha ku duubtaa laastikada oo yuusan u oggolaan in wax duub ah ay ka soo baxaan. Si aad u hagaajiso, naftaada ku caawi qaar ka mid ah timo jarista oo ku dhammee wax yar oo xamuurad ah.
Noocan timaha ayaa ku habboon raggaas jecel qurxinta timaha. Halabuurkiisa Waxay ku saabsan tahay xirashada madaxa sare si loo dhammeeyo dabo aad ku xidhi doonto caag. Haddii digaaggan yar yahay waxa laga tegi doonaa iyada oo aan dheeraad ahayn, laakiin haddii uu weyn yahay waannu soo duuduubi karnaa isagoo samaynaya nooc qaanso ah.
Qaansada noocan ah waxaa lagu soo bandhigi karaa siyaabo kala duwan. Mid ka mid ah siyaabaha Waxaan ku sameyn karnay rootida qaab aan rasmi ahayn, oo aad wax ku ool u ah isla markaana aan ku talagalin inaan wax badan hagaajino timaheena. Laakiin sidan waxay noqon kartaa mid rasmi ah haddii aad rabto: Waxaan sameyn doonnaa ujeedo ah inaan ka tagno timaha gabi ahaanba gadaal u siman, tan waxaan isku caawin doonnaa shanlo ama burush iyadoo ujeedadu tahay inaan si fiican u qaadno guntimaha. Waxaan fuulaynaa timaha madaxa gadaashiisa oo waxaan uga tagi doonnaa aagga cidhiidhi ku filan si aan u xidho daanyeer. Waxaan ku taajineynaa madaxa sare dushaas dusha sare halkaasna waxaan ka sameyn doonnaa rootiga wax ku oolka ah. Si aad si fiican u dhammeysid, waxaan ku dari doonaa lacquer.
Haddii timahaagu aad u leexan yihiin
Waad sameysan kartaa dabada sida aan ku sharaxnay, kaliya waa inaad sameysataa buunshaha meesha ay ku duugan yihiin guntimaha farasku. Noocyada timaha noocan ahi waa kuwo aad u kacsi badan oo qurux badan ragga leh qaabkan timaha.
Ragga timaha dhaadheer leh
Haddii timahaagu dhaadheer yihiin oo xitaa aan lagaa jaraynin, waxaan sameyn karnaa dabada, laakiin markan bunku waxaa lagu sameyn doonaa xoogaa timo dabacsan oo xagga hoose ah. Fikraddu waa deg deg oo wax ku ool ah.
Bun yar ayaa sidoo kale jira.
Waxaa loogu talagalay timo gaaban laakiin muddo dheer ku filan si loo abuuro buunshaha. Waa inaad si xoog leh u kala bixisaa oo aad timahaaga si fiican u haysataa si aad u awoodo inaad waxyaalahan oo dhan daboosho oo aad timaha laastikada ku xidho
Ragga: sida timo dhaadheer loo yeesho
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Ragga ragga